Shenzhen Kactus Sports Qalabka Co., Ltd waxaa la aasaasay sannadkii 2012, in Shenzhen, Guangdong, Shiinaha.
Waxaan booto, soo saaraan iyo iibiyaan accessories waxqabadka baaskiilka, iyo waxay bixiyaan adeegyo la xiriira ka design loogu talagalay in OEM / ODM, wholesales, maraakiibta caalamiga iyo taageero-iib aheyn ka dib.
Iyada oo taageero ka our R heer caalami ah & D kooxda, waxaan Kactus Tech leh dhowr shatiyada goynta-qarkiisa iyo naqshado lahaansho, wada jir ah ula tayada wanaagsan, waxqabadka, raaxada iyo amaanka waxyaabaha our, waxaan u istaagaan soo baxay tartanka caalamiga ah ee suuqa. macaamiisheena oo dhan adduunka oo dhan ka soo, oo aannu u adeegnaa sida warshad OEM qaar ka mid ah baaskiilka iyo guddiga qalfoof ah soo saarayaasha ugu fiican u yaqaan.
Kactus Sport leh 17 xarumaha CNC machining, 8 lathes CNC digital, 2 mashiinada dhimbiil, 8 mashiinada axdi qarameedka, 6 mashiinada wax taaj oo kale duro, dhowr alaabtii kale ee kormeerka qalabka kaabayaal ah.
Iyada oo nidaamka maamulka casriga ah, farsamo xirfadeed, qalabka wax soo saarka sare, on-xigxiga tabo cusub iyo waafajinta suuqa abid-beddelo, Haddaba waxaa la gaaray our furitaankii si aad, macaamiisheena lagu qanci karo.
Raadinta Weeraryahanka in galaya kula baayacmushtari jirtay!